Epos GTW 270 Hybrid muyedzo: Wireless mu-nzeve mahedhifoni ekutamba - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 1, 2021 | Hardware miedzo, nhau, Vhidhiyo mitambo
Chikamu 78%Chikamu 78%
Iine GTW 270 uye GTW 270 Hybrid, Epos ine maviri echokwadi emukati-mumba budiriro mumutoro wayo: Iyo isina waya in-nzeve plugs haina kunangana nevashandisi ve smartphone, asiwo kune vatambi. Musiyano kune mamwe mahedhifoni eBluetooth haungogadzirwa chete neinokwana "Hybrid", asi pamusoro pezvose neiyo dongle inosanganisirwa muchikamu chekutumira. Yakavharirwa mukati uye yakabatana, iyo GTW 270 Hybrid inogona zvakare kushandiswa paPC, Nintendo Chinja kana Sony Playstation 4 uye 5 consoles. Izvo pakutanga zvinonzwika senge zvakajairwa dhairekitori ndiyo inosimudzira yeiyo hybrid vhezheni, iyo inosiyana kubva kune yakajairwa vhezheni - isina hybrid - maererano nekubatana, asi ndeye yakaenzana ruzha rwemhando. Muyedzo inotevera, isu tinoburitsa izvo Epos nyowani-munzeve mahedhifoni ane evatambi maererano nehunyanzvi hwekunzwika.
Wireless, Bluetooth, mu-nzeve - uku kusanganisa kushomeka kwevatambi. Kana zvasvika pakutamba, vagadziri vepaperipheral vanowanzo vimba nemahedhifoni epamusoro-nzeve. Zvirinani muchikamu ichi hapana kushomeka. Idzo nyanzvi dzekurira kubva kuEpos dzave kuda kugonesa vatambi neimwe nzira yavo. Kubva pakuona kwehunyanzvi hwekuona, pane chipingamupinyi chakakosha chekukunda: iyo tambo isipo. Epos inobudirira, zvakawanda zvakatoratidzwa panguva ino, zvakanyanyisa. Iyo GTW 270 saka inova imwe nzira chaiyo.
Epic GTW 270 Hybrid: chiedza, chakanaka ruzha
Yechokwadi isina waya haisi nyowani nyowani yekugadzira, uye kunyangwe muchikamu chemitambo pakanga patove imwe kana maviri munzeve plugs kubva kumakwikwi - kusvika parizvino kusarudzwa kwanga kusiri kwakanyanya, kunyanya kune vatambi. Zvakanakira zviri pachena: haudi mahedhifoni makuru kuti uunze ruzha rwakanaka munzeve dzako. Zvichakadaro, tekinoroji yeruzha yafambira mberi kusvika pari zvino zvekuti saizi yega haisisiri yemhando yepamusoro.
Mapulagi anotora maawa mashanu pachaji imwe chete - iyo yakavharirwa, yakanyatsogadzirwa yekuchaja kesi inopa imwe muto. Mufananidzo: André Volkmann
Epos pakutanga anovimba neaptX codec, iyo inofanirwa kutakura ruzha pasina kunonoka, uye pasina waya, ndiro chairo dambudziko. Izvi zvinobudirira uye zvinoisa iyo Epos GTW 270 Hybrid munzvimbo yakanaka yekutanga kukunda musika. Kutenda ku "aptX LL", iyo latency yakaderedzwa kusvika pamakumi matanhatu ms - unogona kushandisa iyi pane yako smartphone nekushandisa USB-C dongle, iyo inonyanya kushandiswa kubatanidza kune yako imba yemitambo zviteshi, i.e. PC kana iyo consoles. Iyo yakapfava yekumashure: Mafonifoni haatsigire iyo "aptX LL" codec nekukasira.
Semutambi, unogona kutanga wazvibvunza kuti sei uchifanira kuwana chaiyo isina waya munzeve zvachose. Ehe, vazhinji vevatambi vanowanzove nehedhiseti yemitambo - asi iyi inowanzo gadzirirwa kushandiswa kwakamira pane mudziyo. Nekuti mitambo yakawanda-yakawanda yakapararira pamapuratifomu akasiyana mazuva ano, Epos 'GTW 270 Hybrid inogona kuratidza masimba avo makuru kana zvasvika pakubatana. Uye izvo zvinoshanda pasina chero zvipingaidzo zvehunyanzvi, kunyangwe neNintendo's hybrid console, iyo, chokwadi, iwe haungaite kuvimba nayo. Asi: Iyo Nintendo Switch inoziva iyo USB-C dongle pasina matambudziko.
Nehurombo, iyo USB-C dongle inofanirwa kuchengetwa yakaparadzana. Isu takasarudza pane iripachena musiyano nekuti tinoona yakanyanya kukosha kukosha muGTW 270 Hybrid ine chekuita neNintendo Chinja. Mufananidzo: André Volkmann
Iyo Epos GTW 270 Hybrid inogara zvishoma anopfuura maawa mashanu, dzimwe nguva zvishoma zvishoma - zvichienderana nemutoro. Hupenyu hwebheteri hwakasimba, iyo yakavharwa "kesi", iyo inoshanda yekudzivirira kesi, inopa yekuwedzera, iyo pakupedzisira yakasanganiswa yakapoteredza 18 kusvika maawa 20 ekushanda nguva iri mukati. Kana iwe uchifanirwa kuchaja, iyo-munzeve inorembera pamagetsi kweanoda kusvika makumi mapfumbamwe maminetsi. Muchimbichimbi, kukurumidza kuchaja basa kunovimbisa nguva inomhanya isingadarike awa imwe chete mushure memaminitsi gumi nemashanu ekuwedzera mafuta. Kuenzaniswa nemakwikwi, GTW 90 haitore nguva yakareba, asi kazhinji nguva yemaawa mashanu inokwana.
Nenzira, hunyengeri hunotonhorera hungadai huri hwekuve nenzvimbo ye USB-C dongle munyaya yekuchaja. Chishandiso chidiki chakaenzana nehafu yemaeuro maviri emari; mujinga muzasi ungadai wakagoneka. Saka iwe unofanirwa kuchengeta iyo dongle yakaparadzana, kwete zvakaringana, asi zvakare isiri dambudziko hombe - kunyanya sezvo Epos yakabatanidza kanenge diki silicone kavha ine yakabatanidzwa loop.
Iyo trick ine kubatana
Kudzokera kune yekubatanidza zvivakwa zveEpos GTW 270 Hybrid. Zvose zvakataurwa pamusoro pazvo here? Kana bodo. Kubatana kweiyo-yese-inotenderedza kwakabatana nezvimwe zvinorambidzwa. Kana iwe ukashandisa iyo dongle, unogona kutora mukana weiyo yakasimba yekubatanidza zvivakwa zve-munzeve, asi ipapo maikorofoni haizoshande. Mune mamwe mazwi: Muchiitiko ichi, mahedhifoni anongoshandiswa kutambisa - izvo panguva imwechete inoita kuti bhatani riri kuruboshwe plug rirege kushanda.
Zviri nyore kushandisa: Iyo USB-C dongle inongobatanidzwa muchiteshi chakakodzera, kana sarudzo yakabatana kuburikidza neadhaputa tambo. Imwe yasara ipapo "mashiripiti" - uye zvishoma tekinoroji. Mufananidzo: André Volkmann
Saka kana iwe uchitamba mitambo yevazhinji kazhinji kana kunyangwe chete uye uchida kuvimba nekutaurirana kwechikwata kuburikidza nekutaura kwezwi, unogona kungodzokera pairi kana iyo GTW 270 yakabatana "classically" kuburikidza neBluetooth. Panyaya iyi, kubatanidza kwakashanda pasina matambudziko, zvese kuburikidza neyakaedzwa uye yakaedzwa nzira uye kuburikidza ne USB-C dongle. Muchiitiko chekupedzisira, kukanganisa kwekubatanidza kunogona kuitika pano neapo, izvo zvichida nekuda kwekufambiswa kwechiratidzo uye hazvigone kuteverwa kumashure kumidziyo pachayo. Chiratidzo cheizvi iko kusarongeka kwezvinokwanisika kudonha kwekubatanidza uye chokwadi chekuti iyo yakachena Bluetooth mashandiro anoshanda pasina matambudziko.
Kubatana: Yakaderera latency uye Bluetooth 5.1, USB-C dongle
Battery rongedza: Maawa mashanu, kusvika kune mamwe maawa makumi maviri nebhokisi
Fast charge: Hongu - maminitsi gumi nemashanu kwemaminetsi makumi matanhatu ekushandisa
Noise kudzvinyirira: kwete
Mutauro: Maikorofoni ekufona
Kuramba kwemvura: Zvinoenderana ne IPX 5 kubva dikita uye mvura shoma
Webhusaiti yemugadziri: eposaudio.com
Sezvineiwo, iyo yekuchaja kesi iri pamwoyo pekubatanidza; apa ndipo panogona kuitwa yekutanga pairing. Kudzvanya kwenguva refu pane bhatani rimwechete pakesi kunotanga maitiro, uye mirairo inoenderana inogona kunzwika kuburikidza ne-nzeve. Madiki emwenje e LED pane iyo kesi inopa ruzivo nezve pairing mamiriro kune rimwe ruoko uye yekuchaja mamiriro kune rimwe. Izvo zvakanyatsogadziriswa, zvakajeka uye zvinoshanda.
Kana iyo yekubatanidza yasimbiswa, mirairo yakasiyana-siyana inogona kuitwa uchishandisa bhatani riri kuruboshwe munzeve. Semuenzaniso, mafoni anogona kubatwa kana kudzora mimhanzi. Nenzira: Kana iwe ukashandisa GTW 270 parunhare, ruoko rwerudyi runoshanda satenzi, uko maikorofoni inogara zvakare. Epos inotsamira pane asynchronous isina waya yekubatanidza, saka iwe unofanirwa kugara uchiteerera kune mafoni kana mimhanzi ine plug chaiyo kana iwe uchingoda kuzviita nenzeve. Chaizvoizvo hapana dambudziko - kana bhatani rekutonga rakanga risina kusungirirwa kuruboshwe rwenzeve rwenzvimbo dzese. Mukuita, zvisinei, izvi zvinopedzisira zvave zvisingakodzeri ruzivo rune mhedzisiro shoma pane zvingafungwa nemunhu.
Kutakura nyaradzo: Inogona zvakare kushandiswa kune yakareba-nguva masesheni
Kana zvasvika pakugadzira, Epos yakavakirwa pane zvaungazive kubva kune vamwe vanogadzira. Iwo mu-nzeve mahedhifoni - anongowanikwa mune anthracite-grey - tarisa clunky pakutanga kuaona, asi kana ukaabata unogona kutaura kuti akagadzirwa zvakanaka uye kuti huremu zvakare hwakaderera. Kana uchinge waisa mapulagi munzeve dzako, iwe uchakurumidza kuona: mu-nzeve dzakasimba uye dzakasununguka, kunyange kwenguva yakareba. Misoro yerabha muhukuru hwakasiyana zvakare inova nechokwadi chekuti mapulagi anogona kuchinjirwa kune anatomy yenzeve. Izvi zvakajairika mazuva ano, asi zvakare neEpos GTW 270 inova nechokwadi chekuti iwe wakangodzivirirwa zvishoma kubva kunharaunda. Nekudaro, iyo hybrid yechokwadi isina waya munzeve haipe inoshanda kudzvinyirira ruzha.
Zviri nani, zviri nani inzwi: mu-nzeve inogona kugadziriswa nyore nyore kune anatomy yezeve nerubatsiro rwekavharwa silicone nubs. Mufananidzo: André Volkmann
Kana ukangojaira kune-munzeve, unokurumidza kukanganwa kuti wakapfeka mapulagi munzeve dzako. Nekuda kwehuremu hwakaderera, mahedhifoni haanyatso kuoneka. Mabhatani ekuruboshwe munzeve zvakare ari nyore kusvika, kunyangwe - pamwe nekuda kwemutengo wepamusoro - bhatani rekubata ringadai rakanyanya mushandisi-ane hushamwari.
Zvakadaro: Kudzvanya kwebhatani kunoshanda sezvainofanirwa, kunokonzeresa zvakakosha - kunyanya activation yeizwi mubatsiri inzvimbo yakajeka yekuwedzera mazuva ano. Nekudaro, pane dhizaini yevhoriyamu isingakwanise kudzorwa kuburikidza nebhatani, iyo ingangove iri imwe yeanonzwisisika yekumisikidza sarudzo, kunyanya yevatambi. Saka kana ikatsemuka zvakanyanya uye ichirira munzeve, nzira yekudzikisa vhoriyamu iri kuburikidza nemudziyo wekupedzisira kwete mahedhifoni. Pa-smartphone uye paNintendo Chinja - apa ndipo paunogona kuona bhenefiti huru yeEpos GTW 270 - kugadzirisa kunokurumidza uye nyore zvakadaro.
Inzwi: Kunyanya kunaka pakutamba
Iwe unofanirwa kuisa mari inosvika mazana maviri emaeuro eEpos GTW 200 Hybrid, iyo yakajairwa vhezheni inongodhura iri pasi pe270 euros zvishoma. Iwe unogona kutarisira ruzha rwakanaka rweizvozvo - uye iwe unowana izvo, kunyangwe paine zvishoma zvirambidzo. Inzwi rezvivakwa zvewaya-munzeve zvinonyanya kuoneka kana uchitamba. Mumitambo yemafoni pa smartphone, semuenzaniso, nhanho dzevanopikisa dzinogona kuzivikanwa kana iwe ukaisa ruoko rwako pane imwe yevapfuri vechikwata vava kuwanikwa. Call of Duty, semuenzaniso. Iyo GTW 30 zvakare inonzwika yakanaka uye inonzwisisika pamutengo wavo mune mimwe mitambo. Chero zvazvingava: Epos 'yechokwadi isina waya mahedhifoni anogara achigutsa kana zvasvika kune yakasanganiswa ruzha, i.e. highs, mids uye mabhesi anoitika mukubatanidzwa. Kazhinji mabhesi ane kamuri yavo yekuzadza anochengetedza ruzha.
Asi izvi zvinoshandawo: Kana yepakati-renji kana matani epamusoro achitonga, iyo compact munzeve inosvika painogumira. Iwe unogona kutsiva izvi nekuyedza izvo zvakabatanidzwa nesilicone muhukuru hwakasiyana. Izvi zvine mugumisiro unooneka. Izvo zvirinani mahedhifoni anogara munzeve, zviri nani uye zvakanyanya voluminous mufananidzo unonzwika unonzwikawo. Vakachena mimhanzi vanofarira vachanakidzwawo neGTW 270, kunyange zvazvo rudzi rwakakosha zvikuru. Zvakaoma nemimhanzi yechinyakare, dombo uye pop zvinofamba zvakanaka - pano, zvakare, zvinova pachena: matambudziko makuru ari pakati nepamusoro. Mafirimu, kune rumwe rutivi, kunyanya pamafoni efoni, anoshandirwa zvakanaka maererano nehunyanzvi hwekurira nekuda kwekusimudzira kweEpos.
Hunhu hunonzwika hunogutsa - mune dzimwe nzvimbo, kunyanya kana bass ichibatanidzwa, iyo GTW 270 inonakidza chaizvo. Mufananidzo: André Volkmann
Iwo GTW 270 akajairwa ese-anotenderedza asingafadze nekurira kwavo bombastic, asi nekuita kwavo. Zvinoenderana neiyo epic, mhinduro yefrequency ye20 kusvika 20.000 Hz yakavharwa, iyo yakanyanya inzwi yekumanikidza mwero i100 db. Iyo plug paPC yakasanganiswa neGaming Suite kubva kuEpos inogona zvakare kutora chikamu muVirtual 7.1 - zvakare yakanyatso nhanho yakanaka, kunyangwe isinganyanyi kutaurwa pane chaiyo 7.1 ruzha. Nezve software, iyo pakati pezvimwe zvinhu inopa yakaenzana, unogona kugadzirisa zvakanaka, zvine hungwaru uye zvinooneka paimba yemitambo chiteshi. Izvi hazvidi zvachose, nekuti iyo GTW 270 inonzwika yakanaka zvakakwana mukushandiswa kwemazuva ese.
Mhedziso pabvunzo yeEpos GTW 270 Hybrid
Takaedza Epos munzeve kwemavhiki matatu, mumamiriro akasiyana uye pamapuratifomu akasiyana. Mafambiro anoita ma plugs echokwadi asina waya anoenderana zvakanyanya nekushandiswa: PaPC, mahedhifoni eBluetooth asina waya anopa yakasimba kune yakanaka mhedzisiro, kunyanya kana uchitamba. Nesoftware yakabatana, unogona kuseka imwe mhando yeruzha.
Icho chokwadi chekuti mahedhifoni anogona zvakare kushandiswa pamaconsoles ipfungwa yakajeka yekuwedzera: Epos 'inzwi plugs inonyanya kushamisa kana ichishandiswa pamwe chete neNintendo Chinja. Uye: Iyo GTW 270 inogona zvakare kushandiswa zvakanakisa pane smartphone. Iwe unofanirwa kuita zvimwe zvipingamupinyi kana iwe uchivimba neimwe ruzha rwakatenderedza ine inoenderana mutauri setup uye AVR yemitambo yakamira kana kana ukashandisa mahedhifoni epamusoro-soro. Zvakangodaro, iwo mwenje, asi pamusoro pezvese akagadzika earplugs anoita zvakanaka mukuenzanisa kwakananga. Iyo yakanyanya optimized kukwana, zviri nani ruzha rwunosvika munzeve.
Pakupedzisira, ndiko kuchinjika munzvimbo dzinobvira dzekushandisa izvo zvinoita kuti Epos GTW 270 Hybrid ive mukwikwidzi akakomba. Yekukurumidza vhidhiyo musangano paPC, wozochinjira kumutambo wenhare, gare gare kutenderera paNintendo Chinja uye pamwe awa parunhare neiyo smartphone? Vateereri vakakurumbira vaizove varipo pane zvese zviitiko uye vaigona kuburitsa. Epos inogona kubhadhara kuchinjika zvakanaka, asi kana iwe uchivimba nazvo kana kuona iyo yakawanda-kushanda sebhonasi yakazara, iwe parizvino une mashoma mamwe maitiro. Iyo GTW 270 inogutsa sepakeji yakazara: Ivo havasi nyanzvi, asi vakanaka vese-vanotenderera.
EPOS GTW 270 Wireless Hybrid Gaming Bluetooth Mahedhifoni Munzeve, ... * Parizvino hapana ongororo 149,00 EUR tenga
pfupiso Iyo Epos GTW 270 Hybrid inoyevedza nekubatana kwayo uye yakanakisa ruzha zvimiro, kunyangwe zvisiri muchikamu chese. Vatambi vanonyanya kubatsirwa kubva kune aya echokwadi mahedhifoni asina waya.
Kare "Super Nintendo Switch" inofanirwa kuve yakagadziridzwa console
Inotevera Themed slots muna 2021: aya ndiwo maitiro epamusoro!
Jurassic World Evolution 2: Dev-Diary inoratidza mitambo yemitambo
Top 5 Yakanakisa Board Games yevakuru - Space Category
Federal association inoyambira kuti: "Mari yemitambo inoda kuchengetedza kuchengetedza"
Kickstarter 2021: mitambo mishanu yekuunganidza vanhu vakawanda kutarisira